October | 2016 | Radio Himilo
Vazquez Oo Heshiis Cusub La Gaaray Real Madrid.
radio himilo October 26, 2016	Xulka cayaaraha Leave a comment 97 Views
Xidiga reer Isbeyn ee Lucas Vazquez ayaa waxa uu heshiis cusub oo socon doona ilaa 2021-ka waxa uu la galay Real Madrid, Sidaa waxaa xaqiijiyey war ka soo baxay horyaalka Yurub. 25 jirkan ayaa bilowgii heshiiskiisa damacsanaa inuu ku jaan ...
Dhageyso:- Barnaamijka Dooda Himilo.
radio himilo October 23, 2016	Dooda Himilo, Idaacadda Himilo Leave a comment 195 Views
Barnaamijka dooda himilo waa barnaamij si bila ah uga baxa idaacadda himilo, waxaana ku soo qaadanaa qaddiyadaha xasaasiga ah ee taabanaya shacabka soomaaliyeed si loo soo bandhigo xalkooda. Bishaan Barnaamijka waxa uu ku saabsanaa muranka xuduud badeedka soomaaliya iyo kenya ...
Xidiga Arsenal ee Yaya Sanogo oo Bisha January iskaga huleelaya.xaguu ku wajahan yahay?
radio himilo October 18, 2016	Xulka cayaaraha Leave a comment 121 Views
Weeraryahanka kooxda Arsenal Yaya Sanogo ayaa waxa uu qarka u saaran yahay inuu ka tago Premier League bisha Janawari,sidaas waxaa laga soo xigtay Calciomercato. 23 jirkaan kaas oo wakhtiiga badan ku qaatay amaah kooxaha Crystal Palace, Ajax iyo Charlton, ayaan ...
Dhageyso:- Barnaamijka Hawl iyo Himilo.
radio himilo October 17, 2016	Idaacadda Himilo Leave a comment 149 Views
radio himilo October 15, 2016	Xulka cayaaraha Leave a comment 160 Views
Waxaa goor dhaweyd soo gaba gabowday ciyaar xiiso badneyn oo dhex martay kooxaha Chelsea iyo Leicister City, guushu waxa ay raacday naadiga Chelsea oo ku garaacday dhigeeda leicister City 3-o. Goolka koobaad waxaa kooxda Chelsea u dhaliyey Diego Costa daqiiqadii 7aad, ...
Nin 71 Jira oo Guursaday Haweenay 114 jir ah.
radio himilo October 14, 2016	Features Leave a comment 171 Views
Is calmadayaashan ayaa waxa ay si wada jir ah u sheegeen in Marna aysan ka daalin haleelidda jaceylkooda ka hor inta guurkooda aan lagu dhawaaqin. Waxaa lagu kala magacaabaa Zheng iyo Zhang Shuying xiriirkooda waxaa la sheegay inuu socday hal ...
Chelsea Oo ku soo biirtay kooxaha danaynaya goolhaye Donnaruma.
radio himilo October 12, 2016	Xulka cayaaraha Leave a comment 116 Views
Chelsea ayaa ku soo biirtay Juventus iyo Real Madrid tartanka loogu jiro goolhayaha lagu qancay ee Talyaaniga Gianluigi Donnarumma. 17-sano jirkaan , oo dhawaan uun u saftay xulka qaranka Talyaaniga, ayaa loo calaamadeeyey bedelka mustaqbalka dheer ee Gianluigi Buffon sida ...
Xiddiga Bacelona ee Lionel Messi oo ku soo laabtay Tababarka Buuxa ee Kooxdiisa.
radio himilo October 12, 2016	Uncategorized, Xulka cayaaraha Leave a comment 121 Views
Dhowr toddobaad oo uu garoomada dhaawac kaga maqnaa ka dib, xiddiga Barcelona ayaa tababarka buuxa ku soo laabtay maanta oo arbaca ah, inkastoo laga yaabo in aanan uu taam u noqon xulashada koobaad. Lionel Messi ayaa ku soo laabtay tababarka ...
Xulalka Netherland,France iyo Kooxo kale Oo Caawa Dheeli Doona.
radio himilo October 10, 2016	Xulka cayaaraha Leave a comment 106 Views
Labadan dhinac waxa ay ku naaloonayaan guulo waa weyn oo ay gaareen todobaadkii tagay,xulka France waxa ay ka badiyeen xulka Bulgaria,sidoo kale Netherland ayaa 4-1 ku dhuftay Belarus. Tartanka Kooxahan ay ku jiraan Sweden, Dutch iyo French waxa ay ogyihiin ...